Izindaba - IP 65 DOWNLIGHT Ukukhetha Okuphelele Kwephrojekthi Yendawo Yokupaka
IP 65 DOWNLIGHT Ukukhetha Okuphelele Kwephrojekthi Yendawo Yokupaka
Sihalalisela uzakwethu wethu ekuqedeni ukufaka ukukhanya kwe-IP65 kwesibhedlela i-AL-Essra.
Isibhedlela i-AL-Essra esisenyakatho ye-Amman, eJordani eduze kwase-Jordan University sibalulekile embonini yezokunakekelwa kwempilo.Akukhona okokuqala amasistimu e-Liper`s Lighting angena esikhundleni semishini yokukhanyisa esibhedlela i-AL-Essra Hospital.Kubonisa ibhuloho lokuthembana ithimba likaLiper elisungule namabhizinisi amakhulu asekhaya nezikhungo eJordani.
UKUFAKA KOKUPHANSI KWE-IP65 KWENDAWO YOKUPAKA
Muhle umsebenzi owenziwe nguLiper Partner !!!
Ozakwethu be-Liper abagcini ngokuthengisa izibani kuphela kodwa futhi bayafaka, banakekele, futhi benze isevisi yangemuva kokuthengisa.Ozakwethu be-Liper banikeza isevisi yokuma okukodwa kwephrojekthi.
Sibonga abaphathi bezibhedlela ngokuthembela kwabo emikhiqizweni yethu futhi siyakuqinisekisa ukuthi siyohlala sihamba phambili emhlabeni oqhakazile.
I-MA SERIESIP65 DOWNLIGHT ISIKHETHO ESIPHELELE ESENDWENI YOKUPAKA
1. 20/30/40/50W/60W ukukhetha kwamandla okuhlukile
2. IP65 ingangeni manzi, ingangenwa yimvula, ingangenwa amanzi kanye nezinambuzane
3. Ifakwe phezulu - kulula ukuyifaka endaweni yokupaka
4. I-Backlight kanye ne-sidelight design nenhle
5. Ingenza uhlobo lwenzwa ye-radar, nebanga labaseshi elingu-10M.Yonga amandla engeziwe.
6. Imibala emine ingakhetha, emnyama, emhlophe, igolide, ifreyimu yokhuni
7. Ukusebenza kahle kweLumen ngaphezu kwe-100 i-watt ngayinye
8. Hhayi kuphela ukusetshenziswa endaweni yokupaka, ukusetshenziswa kabanzi egumbini lokuphumula, indlu yangasese, inkukhu, umhubhe wangaphandle, njll.
Kungani Khetha Liper?
Yiqiniso, ngaphandle kokungabaza ukhiye uwumkhiqizo omuhle wekhwalithi.
Ukuqamba izinto ezintsha, beka lokho amakhasimende akudingayo enhliziyweni, ukusebenza kahle, kanye nenani elincintisanayo nakho kusisiza ukuthi siwine imakethe.
Yonke imikhiqizo esiyinikeza iwaranti yeminyaka emi-2 yamakhasimende.Sicabanga kakhulu ngesevisi ngemva kokuthengisa yabo bonke ozakwethu be-Liper.Yingakho sinemindeni eminingi yamaqembu omlando omude emhlabeni jikelele.
Ukwesekwa kokukhangisa, usekelo lwegumbi lokubonisa, ukwesekwa kwemakethe ye-Epidemic period, sinikeza ukusekelwa okungcono kakhulu kozakwethu be-Liper.
Ngaphandle kokungabaza, i-Liper ihlala iyisinqumo sakho esihle kakhulu.
Isikhathi sokuthumela: Aug-06-2021